Super Cleaner 2017 Antivirus gam akporo App 10 Atụmatụ | WikiWon
Super Cleaner 2017 Antivirus gam akporo App 10 Atụmatụ
1.0.1 Olee otú Super Clean enyemaka gị ka mma ngwaọrụ arụmọrụ?
1.0.2 Super Cleaner (virus Cleaner & junk Cleaner) Isi:
1.0.3 KEDU NKE PỤTARA ỌHỤRỤ
The Super Cleaner 2017 Nyere ọtụtụ nhọrọ tupu ị wụnye a gam akporo ngwa gị mobile na-egosi na ihe niile na gị na ihuenyo, Ị mere ya. ka dechara arụnyere. Super Cleaner , top 1 Gam akporo Ngwá Ọrụ na junk ihicha, ekwentị agbam ume, nyochaa gị usoro na Antivirus bụ Free na tụkwasịrị obi site n'elu 30 nde ọrụ zuru ụwa ọnụ. Mee ka gị na ekwentị ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla.
Olee otú Super Clean enyemaka gị ka mma ngwaọrụ arụmọrụ?
Ọcha ma doo anya cache
Ebuli na ebe nchekwa ohere
Chọpụta ma wepụ junk, ngwa, na mmapụta faịlụ
Antivirus na Jikwaa apps
download antivirus Booster & Cleaner 3.8.3. Hichaa na-ebuli gị na ekwentị na nanị otu ngwa.antivirus Booster & Cleaner bụ ngwá ọrụ iji nyere onwe elu ohere na ...
Super Cleaner Pro bụ ihe ngwa mepụtara Lucy White dị na ... super Cleaner ... antivirusBooster & Cleaner bụ a ngwá ọrụ iji nyere free elu ohere na gị mobile.
Ọ na ekwentị gị na-laggy na enweghị ohere? Super Clean dị ọcha ukwu, mgbe niile na-na ngwaọrụ gị na-agba ọsọ dị ka ọhụrụ!! (Android 4.0+)
Super Cleaner (virus Cleaner & junk Cleaner) Isi:
Enyere nyochaa ma n'enweghị wepụ junk faịlụ na weghara ebe nchekwa gị na ohere nchekwa. Clean na naanị 1-tap, onwe elu ohere na mbo mbuli ekwentị ọsọ.
Na-enyere aka ọcha mmapụta cache usoro faịlụ mgbe ekpe site uninstalled apps onwe elu gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba disk ohere.
Tụlee CPU ojiji na-akwụsị na ekpo oke ọkụ ngwa wetuo obi CPU okpomọkụ, na na 1-tap.
Cheb'obi gị mobile si virus agha na na-na nzuzo gị mma.
A ngwa ngwa booster onwe elu RAM, ọcha ndabere ihe aga-eme, inye extra n'ọnụ ụzọ na wijetị, desktọọpụ shortcut na ngosi ngwaọrụ.
Inyere gị aka ịchọta adịkarịghị eji ngwa ọdịnala, ka backups na iwepụ enweghị isi ngwa ọdịnala na-azọpụta ndị ọzọ ohere.
Machibido na-enweghị isi ma ọ bụ na-achọghị ngwa site na akpaaka-amalite, mbuli elu na ekwentị gị na na-na na ọ na-agba ọsọ-eji ire ụtọ (Root mkpa)
Nyere ọcha ahụ na-enweghị isi photos, music, akwụkwọ na-enweghị isi ngwa ọdịnala onwe elu ohere na-adị n'elu ngwaọrụ gị. Super Cleaner bụ ihe kasị mma na ngwaọrụ optimizer.
jụụ Ịma Ọkwa
E nwere mgbe ọtụtụ manụ Ịma Ọkwa mgbe anyị na-eji ekwentị. Super Cleaner enyere kpọkọta ndị na-abaghị uru Ịma Ọkwa na-eme ka ha dị jụụ ma dị ọcha, ekwentị ịbụ ihe oru oma.
Super Cleaner ( App-mkpọchi ) , i nwere ike tinye ihe mmezi paswọọdụ nchebe mwute apps, dị ka, Facebook, Message, Gmail, WhatsApp na Snapchat. Mkpọchi gị onwe ngwa ọdịnala site na iji ụkpụrụ ma ọ bụ PIN na na-na gị nzuzo mma si snoopers.
Super Cleaner bụ dakọtara na kasị gam akporo igwe na usoro, gụnyere ma na ọnweghị oke niile ngwaọrụ site Samsung, Huawei, Sony, Motorcycles, LG, TCL, HTC, Nexus, Lenovo na ndị ọzọ ....
Gbanwetụrụ UI style na tinye ọhụrụ ọrụ junk Clean feature;
Kachasị Jụụ ngosi mma ọrụ 'ahụmahụ;.
Tinye Battery nchekwa atụmatụ na ala tab;
Kachasị ebe nchekwa mbipụta na na-dakọtara na ihe ụdị.
Clean Nna ọhụrụ version: The ụzọ kasị mma ọcha gị gam akporo ngwaọrụ. ... na anọ na isi ihe omume ebe: junk Files, Memory agbam ume, antivirus, na App Manager.
jụọ a Question ... Nwere onye ọzọ wụnye Malwarebytes Anti-Malware na Avast ... Ma, na-a, mgbe na-agbalị Malwarebytes, nke m na-ebi site na m na laptọọpụ, na Avast elu unyi Cleaner, ọ bụ Avast Security n antivirus na ...
Ọkara Cleaner enye gị gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba a arụmọrụ agbam ume na-atọhapụ elu dị oké ọnụ ahịa na ebe nchekwa.Clean gị ... Ọ bụrụ na Ọkara Cleaner bụ n'aka banyere ụfọdụ foto, ọ ga jụọ gị iji nyochaa ha. Na nke kacha mma ... Nweta Ọkara antivirus n'ihi na gam akporo .
dabere gị onye na-adịghị na-agba ọsọ android ekwentị. ndị a kasị mma n'elu 10 android Cleaner ... Ọ bụ a ahịhịa Cleaner na antivirus ngwa na ejisie na ebe nchekwa ohere, junk faịlụ, na batrị. ... mmekọrịta na ọhụrụ ndị mmadụ na-amụ banyere n'obodo dị iche iche. .... Ọ bụrụ na anyị na- jụọ gị ihe bụ ihe kasị manụ ihe ị na-eche ihu mgbe .
Nke a ga-gị mgbochi-virus, mgbochi-spyware, na malware nyocha. ... People ibudata ma wụnye mmemme-eche na ha bụ n'ezie free naanị iji na-achọpụta, .... lezie i chọrọ tinye m a fan of C-Cleaner dị ka nke ọma ... .... na m agbasaghị iji na- super-mgbochi spyware na Malwarebytes Anti-Malware (karịsịa ọma).
Mepụtara Systweak software, Systweak gam akporo Cleaner bụ a kama ... nnọọ ka Clean Master, Super Cleaner - antivirus bụ a mobile ngwá ọrụ ..
Nke a na-eji ngwa kacha mma ka gị na ekwentị arụmọrụ mma ma hichaa ọ bụla junk faịlụ ... ọ bụ nnọọ mfe aka na oru oma na-arụ ọrụ ...
Easy interface na ekwentị m bụ ama ngwa ngwa!
Best Ever nhicha App. M ga na-atụ aro Clean Master!! Ma Amazing Ma nke a bụ naanị otu na-eme Anti Virus Ya mere nke a bụ mma
Nnọọ obi ụtọ na nke a App. Ihe ọ na-ekwu ọ na-eme nke ọma. My ekwentị na-arụ ọrụ nnọọ mma. Daalụ.
Arụ ọrụ dị ukwuu ma na ngwa ngwa ma na-eme ihe ọ na-were na-eme. Ọ bụ egwu na-amasị m ya a ọtụtụ! Ị ga-eji nke a kwa, arụ ọrụ nke ọma na ihe niile m na gam akporo ngwaọrụ ... ????☺
Nke a ngwa nwere ike na-niile gị akaụntụ site na ekwentị gị! Nwere ohere ebe na igwefoto! Gịnị? Ọ bụ enyo m!
gam akporo Apps, News	download supo Cleaner, super Cleaner antivirus ngwa, super Cleaner antivirus ngwa download, super Cleaner antivirus maka pc, super Cleaner antivirus review, super Cleaner n'ihi na windo ekwentị, super Cleaner free download full version, super Cleaner pc	Bookmark
Previous edemede Olee otú Iji Download Video Site Facebook Iji Computer, Android
Next edemede AppLock gam akporo App 2017 Full Atụmatụ